मध्य रात मा ओलि को यस्तो घोषणा ? उच्च समझदारीको आधारमा प्रतिनिधि चयन गरौ ? नत्र ….? - jagritikhabar.com
मध्य रात मा ओलि को यस्तो घोषणा ? उच्च समझदारीको आधारमा प्रतिनिधि चयन गरौ ? नत्र ….?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकर्तापंक्तिलाई उच्च समझदारीका साथ प्रतिनिधि चयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको पूर्वसन्ध्यामा भिडियो सन्देश जारी गर्दै ओलीले उच्च समझदारीका आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘प्रतिश्पर्धा मात्रै होइन, अझ उन्नत स्तरको समझदारी र सहमति लोकतन्त्रको उच्च स्तरीय अभ्यास हो’, ओलीले भनेका छन् ।
दलभित्रको समझदारी सुदृढ एकताको आधार हुने पनि ओलीले बताएका छन् । चितवनमा १०–१२ मंसिरमा हुने १०औं महाधिवेशनका लागि शनिबार प्रतिनिधि चयन हुँदैछ ।यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका–१४ छिनेडाँडामा निर्माण भइरहेको विमानस्थलको आज निरीक्षण गर्दै उहाँले हालसम्मको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिनुभएको हो । विमानस्थल आयोजनाका उपप्रबन्धक कृष्णप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्री शर्मालाई हालसम्मको प्रगति, काममा देखिएका समस्या र सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । आयोजना उपप्रबन्धक पौडेलले हालसम्म विमानस्थलको ८७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
विमानस्थलको दुई हजार ५०० मिटर लामो धावन मार्ग(रनवे) गत वर्ष नै सम्पन्न भएको थियो । टर्मिनल भवन, एटिसी टावर, ह्याङ्गरलगायत १४ वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएर साजसज्जा र विद्युत् तथा उपकरण जडान कार्य भइरहेको आयोजनाको आर्थिक प्रशासनका वरिष्ठ अधिकृत सविन फुयाँलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विमानस्थलको ट्याक्सी–वे, ह्याङ्गर, एप्रोन, पार्किङ निर्माणलगायत काम सम्पन्न भएको छ । निर्माणाधीन विमानस्थल तीन हजार ८९९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । रु २२ अर्बको लगानीमा चीनको सिएएमसी इञ्जिनीरिङ कम्पनीले विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ । विमानस्थलका लागि २०३१ सालमा छिनेडाँडाको तीन हजार १०० रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो ।